Abdikadir Mahat Kuno oo kugeeriyoodey shilkii diyaaradeed ee uu kudhintay wasiirkii shaqada Kenya
Abdulqaadir Mahad Kuno waxa uu ahaa mid kamid ah labadii duuliye ee diyaarada
Burburkii diyaaradii ay ku dhinteen Axmed Khaliif iyo Abdiqadir Mahad Kuno
SomaliTalk.com | Jan 25, 2003
Abdiqaadir Mahad Kuno waxa uu ahaa mid kamid ah labdii duuliye ee ku geeriyoodey diyaaradii uu ku geeriyoodey Axmed Khaliif.
Abdiqaadir Mahad Kuno, 34 jir, oo ka dhashay beesha Soomaaliyeed ee Ogaadeen, waxaana dhalay nin reer Garisa ah oo maal qabeen ah, waxaana adeero u ahaa wasiirkii hore ee xisbiga KANU Mr Huseen Macallin Maxamed iyo taliyihii hore ee ciidamada Kenya Mr Maxamuud Maxamed.
Wararka ka imanaya gobolka woqooyi bari Kenya waxa ayaa sheegaya in dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan ay aad uga naxeen geeridii ku timid marxuumadii diyaarada la dhacday.
Maanta oo sabti ah ayaa meydkii marxuum Axmed Khaliif loo qaaday Wajeer si loo aaso maanta. Mid kamida labada duuliyena maanta yaa lagu aasayey Nairobi.
Baaritaan ayaa socda sabaabtii ay diyaaradu u qaraxday. waxaana wararka ugu horeeyaa sheegayaan in garoonka Busia ee diyaaradu ka kacaysey uu ahaa mid aan u qalimin in diyaarad noocaas ah ay fariisato waayo aad ayuu u burbur san yahay.
Madaxweynihii hore ee Kenya, Moi, waxaa lagu soo waramay in uu aad uga naxay geeridii Axmed Khaliif, tacsi ayuuna u diray eheladii marxuumka. Wasiiro ka tirsan dawlada cusub ee Kenya aya lagu soo waramay in ay u duuleen Wajeer si ay uga qayb galaan aaska marxuum Axmed Khaliif.
Diyaaradaas waxaa ku dhintay labadii duuliye ee Axmed Khaliif GUJI.
TAARIIKH KOOBAN EE MARXUUM AXMED KHALIIF
Anigoo ah Saciid Siyaad Shirwac ahna ka qaybgalayaasha shirka Eldoret ee Somalida nabada loogu raadinayo waxaan halkaan tacsi uga dirayaa dhamaan umada Somaliyeed iyo umada ree Kenya meel kasta oo ay joogaan geeridii ku timid allaha u naxariistee marxuum Axmed Maxed Khaliif wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha ee dalka Kenya.
Waxaan kale oo aan si gaara ugu tacsiyeynayaa Eheladii iyo Qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka iyo dhamaan dadweynaha ree wajeer, Mudane Axmed Khaliif oo ahaa nin taariikh dheer ku leh Goboka Waqooyi Bari ee dalka Kenya welibana dadaal dheer u galay fidinta Diinta islaamka, waxaan illaah uga baryeynaa in uu Janadii fardowsa ka waraabiyo samir iyo iimaana ka siiyo umadda Somaliyeed iyo tan Kenya.
ssshirwa@hotmail.com or yahoo.com
Jan 25. 2003